RFID Tags, RFID Kaadị, Widband Widband - Toptag
Nnọọ To Toptag
Dị ka ahụmahụ RFID ngwaahịa emeputa, anyị na-enye nke kacha mma na ngwaahịa.
KWESELRENT CLỌ USBUSR C ỌR EX
Toptag sales otu nwere ike inye ọkachamara aro maka gị ahaziri mkpa. Anyị na-enye ihe nlele n'efu maka ule gị.
Ọnụahịa ịma aka
Toptag na-ebuli usoro mmepụta oge niile, belata ọnụahịa mmepụta, ma melite arụmọrụ mepụtara, iji nye ndị ahịa ezigbo ngwaahịa na ọnụ ala.
Ndị nwere ahụmahụ
ihe karịrị afọ 20 mmepụta ahụmahụ, 2000 mkpara, 10 R&D ìgwè na 20 elu ọkọlọtọ mmepụta edoghi maka kaadị na mkpado. Toptag raara nye na R&D, na emeputa na ire nke ngwaahịa RFID na azịza RFID.
Anyị na-enye dị iche iche nke rfid mkpado maka dị iche iche na ngwa. Anyị ịzụlite ọhụrụ RFID ngwaahịa dị ka ndị ahịa mkpa ...
Topag transponders na-enyere aka ịhụ enweghị ntụpọ enweghị ike ịchọta ma belata ọghọm, yana ịkwalite njikwa ngwaahịa na ọsọ ọsọ. Ntugharị na-enweghị kọntaktị RFID na-eme ka nchịkọta data na nzi ezi nke data dịkwuo mma, na-eme ka nsuso na-efu ọnụ ma na-abawanye ziri ezi.
Ọ na-eji teknụzụ RFID iji jikwaa ngwa ahịa azụmaahịa ma ọ bụ nke onwe, uwe ma ọ bụ akwa, na -ewepụta ngwa ahịa ma belata njehie mmadụ n'ịsa na usoro ịgba ụgwọ. Toptag nwere mmekọrịta ogologo oge na Hilton, Marriot.
Ọrụ RFID na-asa ákwà
Igwe ihe omume ikuku emeela ka ọ bụrụ ọkọlọtọ n'ememme egwu kachasị elu nke mba ahụ, ya na ndị agbụrụ ji nganga na-eyiri eriri aka RFID kwa afọ dị ka akara ngosi nke nsọpụrụ. Toptag nwere nkwado na ọtụtụ ememme ndị dị ka Rio ememme, SnowGlobe Music Festival wdg.
Tiketi maka Omume & Ntụrụndụ
Toptag nwere ijikọ teknụzụ dị elu iji jikwaa akụkụ ọ bụla nke ahụmịhe ahụike na mpaghara pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ahụike - nlekọta ndị ọbịa, nyocha akụ na nyocha ọnọdụ, ọrụ ọnọdụ oge, ịgba ụgwọ na udo nke uche.
Kemgbe ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na mmepe nke ngwọta njikwa ike ịnweta maka ịnweta anụ ahụ na nke ezi uche dị na ya, ndị otu na gọọmentị tụkwasịrị obi Toptag iji nye nchebe na nchekwa nchebe na-enweghị atụ.
Mkpado RFID na-enye sistemu iji mata ụgbọ ala ka ejiri elektrọnik mara ya site na mita. Enwere ike ịlele ụgbọ ala na akpaghị aka, yana ibu mara. Enwere ike ịlele ha ọzọ dịka ọ dị mfe. Site n'enyemaka ọkachamara, RFID nwere ike inye ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji chọpụta ọtụtụ ụgbọ ala, ịchọta ha n'otu saịtị ma ọ bụ n'otu mpaghara n'ime saịtị, nke a na-ejikarị maka ETC ma ọ bụ njikwa ogige.
Nkpachapụ anụ ụlọ na RFID nwere ike ịbụ ngwa dị mkpa na ngwa ọrụ onye ọrụ ugbo iji mata anụmanụ ọ bụla yana usoro ọmụmụ na ahụike ya. Ndị na-ahụ maka anụmanụ na-achọzi ka anụ ụlọ niile jiri RFID mee ihe iji mepụta usoro iji chọpụta anụ ụlọ ndị furu efu na ndị achọtara.
RFID-na-metal transponders nwere ike ịbụ na a dịgasị iche iche nke akpan owo nsuso na nabatara umu ngwa oru. Ngwa ndị bụ isi bụ nsonaazụ akụ na sava na laptọọpụ na ebe data data IT, njikwa njikwa arụmọrụ na mmepụta, mmezi mmanụ na gas, na gas cylinders, nsuso ngwa ọrụ, nsuso ngwa agha, na njikwa njikwa ngwaọrụ ahụike.
RFID na Igwe
Taa, ma ọ bụ na EC na kaadị akwụmụgwọ, kaadị ID nke onwe, akwụkwọ ikike ngafe ma ọ bụ kaadị mkpuchi ahụike, a na-echekwa data na ọtụtụ ibe RFID, site na enyemaka nke ngwa dị mma, enwere ike ịgụ data nkeonwe na nzuzo site na smart phones. Toptag's RFID Blocking cards na-enye nchebe a pụrụ ịdabere na ya site na ịgụ data na-enweghị ikike na ugboro ole 13.56 MHz.
E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2008 na ụlọ ọrụ abụọ dị na Hong Kong na Shenzhen, China. Anyị ụlọ ọrụ na-tọrọ ntọala site na otu ìgwè nke omiiko na ihe ndị mmadụ na ọgaranya RFID trading na rụpụta ahụmahụ. Anyị ụlọ ọrụ na-pụrụ iche dị iche iche RFID na mkpado na kpọọ dị iche iche shapes na ihe. Mkpado anyị sitere na obere oge ruo na oke ikuku dị elu, nke a na-ejikarị na mpaghara NFC, ịkwụ ụgwọ ekwentị, njikwa nnweta, njikwa nnweta, njikwa ngwongwo, njikwa ngwa ahịa, nchekwa na njikwa, anụ ụlọ na ihe ndị ọzọ.